Xubnaha Gudiga Fulinta ESPDP oo Addis Tagay & Cabdulahi Atoobiya oo Xilalkii Kilalka Kuli Laga Qaaday. – Rasaasa News
Jijiga, August 21, 2014 – Xog Addis Ababa naga soo gaadhay, ayaa sheegtay in dhamaan xubnaha gudiga fulinta ee xisbiga Kilalku tageen magaalada Addis Ababa oo ay kaga qayb galayaan shir lagu xalinayo khilaafkooda. Khilaafka u dhaxeeya hogaaminta ugu saraysa Kilalka, waxaa xalkooda haya xarunta dhexe EPRDF oo ah meesha laga dabqaato.
Laba maalmood ka hor ayay xubno ka tirsan gudiga fulintu codsadeen in shir dag dag ah xisbiga ESPDP qabto si loo saxo madmadowga jira. Sida la wariyey waxaa soo jeedintaas diiday gudoomiyaha xisbiga Maxamed Rashiid. Lama sheegin sababatuu u diiday.
Khilaafkan ayaa sababay in madaxweyne ku xigeenkii maamulka Kilalka Cabdulaahi Itoobiya maanta laga qaado dhamaanba xilalkii uu Kilalka ka hayey. Cabdulaahi Atoobiya wuxuu hore shalay uu wareejiyey xilkii hogaanka nabadgaliyada iyo cadaalada, kaas oo uu ku wareejiyey ku xigeenkiisii Shugri Badal.
Lama oga waxa ka soo bixi doona kulanka ka socda Addis Ababa iyo waliba cida loo magacaabi doono madaxwayne ku xigeenka maamulka Kilalka.
Arintani waxay daba socotaa kulama hore oo xisbiga EPRDF, ugu qabtay hogaaminta Kilalka in la kala hufo xubnaha xisbiga ESPDP, ka hor inta aan la gaadhin doorashada ay sideedda bilood ka hadhay.
Wararka ka jira magaalada Jijiga ayaa aad u badan oo aan la rumaysan karin. Waayo aragnimada maamulka Kilalka lagu yaqaan, kolka ay gudiga fulintu ku soo laabato Jijiga, waxaa la filayaa in uu dhici doono isbadal balaadhan oo dhinaca maamulka ah.
Xaflado iyo Dabaal Dagayo Lagu Qiimaynayo Sanad Guurada Jwxo, oo Lagu Qabtay Dalal Badan